घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको सेप्टेम्बर 16, 2019
एलबीले पूर्ण स्टोरीको फुटबल प्रतिभा प्रस्तुत गर्दछ जुन सबैभन्दा राम्रो नाम हो "RJ9"। हाम्रो राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय बाट उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता ल्याउनुहुन्छ। विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, रिश्ते र व्यक्तिगत जीवनमा वृद्धि गर्न समावेश छ।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक बहुमूल्य स्ट्राइकर छ। यद्यपि, केवल केहि कम रायल जिमेनेज जीवनी जो धेरै रोचक छ। अब अनावश्यक बिना, सुरु गरौं।
राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
सुरू गर्न, उनको पूरा नाम राउल एलोसो जेनेज Rodríguez। राउल जिमेनेज मई5को 1991th दिन मा पैदा भएको थियो। उनी आफ्नो मामा, मार्था Rodríguez र बुबा, मेक्सिको, टपेजी मा राउल जिमेनेज वेगा मा जन्मेका थिए।
यसले तिनीहरू सँगसँगै कति लामो समयसम्म पुग्दैन। तर जब तपाईं एक सुन्दर जोडा देख्नुहुन्छ, तपाईलाई यो थाहा छ !. मार्था र वेगा दुवैले टुपेजीमा एक मध्यम वर्ग परिवारको परिवार निर्माण गर्ने निर्णय गरे, एक मेक्सिकन शहरको अनुरोधमा उनको सुन्दर सुन्दर पोखरीको लागि जान्छ।
राउल जिमेनेज आफ्ना भाइबहिनीहरूसँग उठे; मिरांडा जिमेनेज र दुई भाइहरू नामक एक बहिनी, रउल एन्ड्रे नाउँको अग्लो र जसको नाम जिमनेज परिवारको जन्म भएको छ जसको नाम अझै राउल छ। सबै बच्चाहरू मेस्टिजो मैक्सिकन विरासतमा जन्मिएका थिए जुन युरोपेली र इन्डेक्सिसिन मेक्सिकनको मिश्रण हो।
एक जोभियल र हेरविचार भाइ:
उनको बचपनको दिनबाट सही, राउलले थाहा पाएको थियो कि यसले वास्तवमा मुस्कान भन्दा बढि मांसपेशिहरु लिन्छ। यो तलका बालबालिकाका तस्वीरहरूमा देखिनको रूपमा उनको निरन्तर मुस्कुराउने आदतमा देख्न सकिन्छ।
बच्चाको रूपमा शुरुमा, राउल जिमेनेजले भाइलाई हेरचाह गर्ने विशेषता पनि प्रदर्शन गरे, जसले आफ्नो सानो बहिनी राखे "Miri" हात र खुट्टाको रूपमा नजानुहोस् र कहिलेकाहीं उसलाई अन्धकारमा अन्धकार नदिनुहोस्।
राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
स्थानीय टोलीका पैचहरूका लागि खेल्न पछि, राउलका लागि राजनको जुनूनले उनलाई क्लब अमेरीकाको युवा अकादमिक रोस्टरमा भर्ना गर्यो जसले उनको प्रतिभा प्रदर्शन गर्न चरण दिए। अक्टोबर 2008 मा पहिलो डिभिजनमा डेब्युट गर्नुअघि उनले 2011 मा क्लब अमेरीका युवा प्रणालीमा गम्भीर युवा क्यारियर यात्रा सुरु गरे।
निम्न वर्ष, 21-वर्षीय जिमेनेजले आफ्नो देश 2012 ओलम्पिक खेलहरूमा प्रतिनिधित्व गरे जहाँ उनको टोली पराजित भयो नेमारको ब्राजिललाई सुनको पदक संकलन गर्न। त्यो उनको अन्तर्राष्ट्रिय स्प्रिंगबोर्ड थियो।
ओलम्पिक विजय पछि तुरुन्तै सबैले बताउन राउल भोकाएका थिए। अर्को वर्ष, राउल जिमेनेजले 2013 मा अमेरीकासँग आफ्नो पहिलो च्याम्पियनशिप जित्थे।
राउलले जितेपछि यो विजय हासिल भयो Clausura टूर्नामेंट, एक पल जब यूरोपीय स्काउट्स उनको दरवाजे मा दस्तक शुरू गरे।
राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सडकको प्रसिद्धि
2014 जिमेनेजको मार्ग पछ्याएर उनको मेक्सिकन कम्प्याट्रीटहरूको धेरै लिइएको छ। उनले अन्ततः युरोपको लागि नेतृत्व गरे। जिमेनेजले एटलेटिको म्याड्रिडका लागि साइन इन गरे जुन त्यो समय थियो, स्पेनको ला लीगा च्याम्पियनहरू। उहाँले आफैलाई अयोग्य कार्य दिनुभएको थियो गवर्नर, डिएगो कोस्टा.
"यो डिएगो फोर्लान, डिएगो कोस्टा र रेडमामेल फाल्कको को जोडी गर्न प्रयास गर्न सजिलो छैन" जिमेनेज एक पटक आफ्नो एटलेटिको म्याड्रिडको साथको शुरुआती क्षणमा।
"डाइगो फोर्लान र कोस्टा दुवै उत्कृष्ट खेलाडिहरू हुन् जसले तिनीहरू यहाँ आए जब सामान वितरित भए। त्यसैले, मलाई आफ्नै इतिहास बनाउन र म के गर्न यहाँ के गरें - जो स्कोर लक्ष्य हो। "
दुर्भाग्यवश, जिमेनेज जिउँदैनन् डिएगो शिमोनको अपेक्षाहरु। यो परिणाम बिनफिकामा सामेल हुन बाहिर पठाइयो।
राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- प्रसिद्धि उठाउनुहोस्
राउल जिमेनेज बेन्फिकामा बेचेको थियो। क्लब संग, उनले दुई लगातार जीत दिए लिग शीर्षकहरू जसले उनी आफ्नो परिवारसँग मनाए।
90 मिनेट वा एक स्थानान्तरण:
एक तथ्य मेक्सिकनको लागि खुशी थिएन। बेन्फिकाको लागि 18 लेग उपस्थितिहरूमा 80 लक्ष्यहरू बनाइएको तथ्य 60 को उन बेंच को बेंच देखि आने वाला। राउल जिमेनेजले यस तथ्यलाई सन्तुष्ट पार्न सकेन कि उसले अझै पनि 90 मिनेट खेल्न सक्दैन। यसले उसलाई बिनफिका छोड्यो नुनो एस्पेरिटोटो सान्टोको ब्वाँसो प्रोजेक्ट।
विली बोलिको आगमन, रूबेन नेविस र डियोगो जोटाले म्याक्सिकनलाई उत्साहित गरे जुन त्यो समयमा पनि वोल्भको सबैभन्दा ठूलो कूपको रूपमा मानिन्छ। भेल्वमा, राउल जिमेनेजले आफ्नो 90 मिनेट खेलेका थिए जसले आफ्नो क्यारियर रिबुट गरे, उनलाई लक्ष्यको अगाडि उत्कृष्ट बनाइदिए।
एक शक बिना, उनको अप्रयुक्त लक्ष्यों को आफ्नो शताब्दी को भित्र क्षमता क्षमता को ब्वाँसो को रूप मा finetuned थियो। बाक्लो, जुन तिनीहरू भन्नुहुन्छ इतिहास हो।
राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- सम्बन्ध जीवन
हरेक महान मानिसको पछि, सधैं एक महिला हो, वा यसो भन्दै जान्छ। र लगभग हरेक सफल म्याक्सिकन फुटबलर पछि, त्यहाँ ग्लैमरस डब्लुएच ड्यानिला बासुमको सुन्दर व्यक्तिमा देखा पर्दछ।
"तपाईंको पक्षमा 1 वर्ष मनाउँदै! मेरो जीवनको भाग हुन र मेरो साथ हरेक क्षणमा धन्यवादको लागि धन्यबाद। म तिमीलाई माया गर्छु 😍♥ ​​@ danielabassom "
जिमेनेजको दृढ क्षमताहरू, साथै पिचबाट उनको जीवनशैली तलका रूपमा देखिएका चित्रहरूको निर्माण गर्दछ।
राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- व्यक्तिगत जीवन
थाहा पाउनु राउल जिमेनेजको व्यक्तिगत जीवनले तपाईंलाई तिनको पूर्ण चित्र प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।
उनको बारेमा केहि रोचक कुरा हो त्यो फल मनपर्दैन। राउल एक पटक थाहा पाए कि जब उनी एक सानो बच्चा भए, तिनका आमाबाबुले केला खाएर प्रयास गरे, र उनले मनपराएनन्। त्यस पछि, उनले कुनै पनि प्रकारको फल मनपर्थ्यो।
बच्चाको रूपमा जिमेनेजले अन्य खानेकुरा खानेकुरा नगर्ने चाहानुहुन्छ। उहाँले फलफूलको लागि आफ्नो अपवाद जारी गर्नुभयो।
फिर्ता घर, राउल जिमेनेज उपनाम दिइएको छ "Alo " जसको छोटो रूप हो "Alonso"उनको मध्य नाम। यो हो किनभने उनको पिता र दुई अन्य भाइहरू पनि "Raul ".
डल्फिनको लागि प्रेम:
फुटबलबाट टाढा, जिमनेज धेरै पटक डल्फिनसँग खेलिरहेको देखियो।
राउल जिमेनेज बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य- पारिवारिक जीवन
टाक्सजीको सम्पूर्ण मेक्सिकोमा राउल जिमेनेजको परिवार सबैभन्दा उत्कृष्ट फुटबल परिवारको रूपमा चिनिन्छ। परिवारमा, त्यहाँ एक अर्का सदस्य हो जसले फुटबल व्यवसायमा जीवनमा आफ्नो सपनाहरूको भाग लिन्छ।
राउल जिमेनेजको भाइ रउल एन्ड्रे पनि फुटबलमा छ। हाल फिल क्लब क्लबका एकेडेमी टोलीमा गोर्खाको रूपमा उत्साहित भएको छ जसले आफ्नो बुबालाई आफ्नो फुटबल आधार प्रदान गर्यो। 15 वर्षको उमेरमा रौल एन्ड्रेले आफ्नो सफलताको कहानीको लागि पहिले नै आफ्नै घर किन्नुभएको छ। उनले फुटबल खेल्दा समेत, रौल एन्ड्रेले आफ्ना अध्ययनको नजर कहिल्यै हराउँदैनन्।
हालैमा, खेलकुद मेरिट पुरस्कार 2018 द्वारा आयोजित टेपिजी समुदायका नेताहरूले जिनेनज परिवारले सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार पाएका थिए।
Raul Alonso Jiménez Rodríguez निषेधार्थ छ, टिप्पीजी को एक सुपरस्टार।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो Raul Jimenez बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू पढ्नका लागि धन्यवाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।